Hogaamiihii Daacish ee dalka Afgaanisan oo la dilay iyo askar Mareykanka ah oo iyana la sheegay in … - Hablaha Media Network
Hogaamiihii Daacish ee dalka Afgaanisan oo la dilay iyo askar Mareykanka ah oo iyana la sheegay in …
HMN:- Dowlada Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in howlgal qorsheesan lagu dilay Hogaamiyihii ugu sareeyay kooxda Islaamiga Daacish faraceeda dalka Afgaanistan Abdel Hasib .
Hogaamiyahan kooxda Daacish ayaa lagu dilay Bariga dalka Afgaanistan, waxaana howlgalka lagu dilay Hogaamiyaha Daacish si wadajir ah u fuliyay Ciidamada gaarka dalka Afganaistan iyo Ciidamo Mareykan ah.
Howlgalka lagu dilay Hogaamiyaha Kooxda Daacish ee dalka Afgaanistan waxaa sidoo kale lagu dilay labo askari oo katirsanaa Ciidamada Mareykanka oo ka qeyb qaadanayay howlgalkaasi. sida ay xaqiijiyeen saraakiil Mareykan ah.
Hogaamiyaha Daacish ee la dilay ayaa la tuhunsan yahay in uu ka dambeeyay weerarkii bishii March lagu qaaday cisbitaalka ugu weyn milateriga Afghanistan ee ku yaalla Kabul, kaasoo ay ku dhinteen dad ku dhaw 100-qof oo ciidamo u badnaa.
Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa sanadkii hore sidan oo kale u dilay hogaamiyihii Kooxda Daacidh qeybteeda dalka AFgaanistan, waxaana hogaamiyaasha kooxdaasi la kulmayaan weeraro joogto ah.
Ururka dowladda Islaamiga ayaa sanadkii 2015 shaaciyay in uu howlgal ka billaabay dalalka Afghanistan iyo Pakistan oo uu ugu yeeray magaca Khuraasaan, tan iyo markaana waxa uu geystay weerarro khasaaro ba’an reebay.
Wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pengaton-ka ayaa sheegtay in ay damacsan tahay sidii dhammaadka sanadkan ay Afghanistan uga baabi’in lahayd ururka isku magacaabay dowladda Islaamiga.